Leadfeeder: Ziva uye Score B2B Makambani Anoshanyira Yako Saiti | Martech Zone
Anotungamira iyi webhu app inowedzera huchenjeri hwako hwekutengesa nekubatanidza data rako rekutengesa uye rekushambadzira, zvichigonesa sangano rako kuwana mabhizinesi matsva uye kuongorora vatengi varipo vari kuuya kuwebsite yako. Kuzivikanwa kunosanganisirwa nedhatabhesi yakafuma yevashandi kwaunogona kuwana maemail uye nhoroondo dzemagariro evanoita sarudzo mukati mekesheni. Ichi chishandiso chakakura chemabhizinesi eB2B nekuti inogona kuzivisa vashanyi vasingazivikanwe vane chinangwa chekutenga.
Ziva ABM Tarisiro Ekushanyira Saiti Yako
Sechikamu che Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira (ABM) zano, ichi chishandiso chinonakidza. Sezvo iwe uchinongedzera, kushambadza, kana kukurudzira zvigadzirwa zvako uye masevhisi kumakambani akasarudzika, unogona kuyambira vashandi vako vekutengesa kana iwo makambani ari kushanyira webhusaiti yako uye uone kwavanenge vachitaurirana pane yako saiti. Leadfeeder inoita kuti iwe uenzanise zvinyorwa zveakaundi ako kuLeadfeeder, kupa rep, uye kuziviswa pavanongoshanyira webhusaiti yako. Yako yekutengesa timu inogona kuzoteedzera ichiteedzera nechinangwa.
Uchishandisa LeadFeeder Mune Yako Yekutengesa Maitiro
Kushandisa chishandiso chakadai kunogona kuwedzera ako ekutengesa zvikwata tarisiro pane yakakwira-tarisiro tarisiro yezvako zvekambani zvigadzirwa nemasevhisi. Na Leadfeeder uye yako CRM kana ABM chikuva, zvakajairika maitiro anogona kutaridzika seizvi:
Mushanyi asingazivikanwe anosvika pawebhusaiti yako.
Kubva pane mamwe mafirita ebhizinesi awakamisa iwe kana zvinangwa zveABM zvawakawiriranisa, mumiriri wako wekutengesa anoziviswa nezve chiitiko ichi.
Kana usiri kuita ABM, yako yekutengesa timu inogona kutarisa kumusoro kambani uye kuona kana iri tarisiro kana kuti kwete zvichibva pane yayo kambani kambani.
Kana iri tarisiro, mumiriri wako wekutengesa anogona kubva atarisa kumusoro kune vanobatana nekambani iri Anotungamira kuziva kuti ndiani anoita sarudzo mukati mekambani kuti ataure naye.
Iwe unokwanisa kungoendesa maemail kubva kune yako yakasanganiswa email kushambadzira chikuva kana wako wekutengesa rep anogona pachako kutumira tsamba kana kufona uchipa rubatsiro kana kuseta yekutengesa kufona.
Leadfeeder Zvimiro Sanganisira
Bata Insights - Leadfeeder inopa mukana kune rakasimba dhatabhesi revaya vanobata iwe. Iye zvino unogona kutanga hurukuro uine kushoma kushanda.
Otomatiki lead zvibodzwa - Yako inotungamira inotungamira inoiswa otomatiki kumusoro kwako kwekutungamira runyorwa kuti iwe uzive kwekuisa pfungwa yako kunotevera.
Pakarepo Kutungamira jenareta - Yedu tracker inogara ichisundidzira data yega yega 5-mins! Kukupa iwe kugara kurukova mikana yekutevera nekukurumidza pavanopinda.
Yemunhu Email Email Alerts - Kana makambani akasarudzika achishanyira webhusaiti yako iwe unozonyeverwa neemail zvinoreva kuti unogona kutevedzera nenguva yakakwana.
Zvekushandisa kune yako CRM - Paunenge iwe wabatanidza imwe yeedu mazhinji CRM kubatanidzwa, kana Slack, kune yako Leadfeeder, gara kumashure apo isu tinobva tangotumira kushanya kutsva kune yako yekutengesa pombi.
Vashandisi Mahara - Wedzera sevashandisi vakawanda sezvaunoda uye shandisa Leadfeeder's lead manejimendi maturu pamwechete kuti kambani yako isambopotsa imwe online lead.
Simba Kutsvaga - Tsvaga chero kambani muLeadfeeder uye utarise yavo yakazara kubhurawuza nhoroondo kuti iwe uwane mufananidzo uzere wezvinovafadza.
Zvakawanda Kuchenesa - Gadzira uye chengetedza ese ese mafeedi ane simba semakambani anobva kune imwe nyika, mushandirapamwe weAdWords kana kune imwe peji rewebhu.
Leadfeeder inosangana nePipedrive, Mailchimp, Salesforce, Hubspot, Zoho, Zapier, Microsoft Dynamics 365, Slack, WebCRM, G Suite, Google Data Studio, uye Google Analytics.
Kutanga 14-yemazuva Mahara Muedzo weLeadfeeder
Kuzivisa: Tiri kushandisa chakabatana chinongedzo che Anotungamira munyaya ino.
Tags: account-based kushambadziragoogle analyticsgoogle data studiogsuitehubspottinotungamiramailchimpMicrosoft dynamics 365PipedrivesalesforceusimbeWebCRMzapperZoho